Taliyaha booliska Somalia iyo Keating oo Gaalkacyo tagay maanta + Ujeedka - Caasimada Online
Home Warar Taliyaha booliska Somalia iyo Keating oo Gaalkacyo tagay maanta + Ujeedka
Taliyaha booliska Somalia iyo Keating oo Gaalkacyo tagay maanta + Ujeedka
Gaalkacyo (Caasimada Online) – Wafdi uu hoggaaminayo Taliyaha Booliska Soomaaliya Jen. Bashir Cabdi Maxamed ayaa goor dhow gaaray magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Wafdiga ayaa sidoo kale waxaa qeyb ka ah Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Michael Keating iyo Xubno kale,waxana gaalkacyo kusoo dhaweeyey masuuliyiin ka kala tirsan Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Booqashada Taliyaha ayaa lasheegayaa in ay la xiriirta u kuur gelida xaalada ammaanka magaalada iyo barnaamijka isku dhafka ciidamada sugaya ammaanka magaalada, kaasoo ay taageereyso Qaramada Midoobey.
Wafdiga taliyaha Boolisk iyo Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha-Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa waxa ay booqan doonaan Xerada ay ku sugan yihiin Ciidamada isku dhafka ee loogu talo galay sugida amniga Gaalkacyo iyo Xarumo kale.
Sidoo kale waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan Maamulka Magalada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland,qeybaha kala duwan ee Bulshada Magalada Gaalkacyo.